Yakakwira Frequency Induction Soldering PCB Bhodhi neCopper Pipe
Induction Kutengesa PCB Bhodhi neCopper
Industry: Chiremba & Dental
Zvinhu: Flat mhangura mapaipi, PCB bhodhi
Alloy: Yakadzika-kupisa mutengesi paste
Zvishandiso: DW-UHF-6KW-III ruoko rwakabata induction brazing muchina
HLQ yakafonerwa nemugadziri anotungamira wekurapa ekuongorora michina ari kuedza kuendesa hunyanzvi muhunyanzvi hweMagnetic Resonance Imaging (MRI).
Mapaipi akapetwa, anowonekwa mune ino yekudziya application, anoshandiswa kuendesa kupisa nekushoma kupisa mutsauko kana kuparadzira kupisa pamusoro pechinhu.
Our induction kupisa mhinduro yakabatsira mutengi kucheka nguva yekugadzira iyo yakambotora awa 1 kugadzira mapaipi gumi nematanhatu ekupisa emhangura.
Iyo DW-UHF-6kw-III induction heat power supply pamwe neye chiteshi chekupisa chakabudirira kuita dhizairo mumasekondi gumi nemashanu. Isu takashandisawo imwe yekodhi-yakagadzirwa macheni emagetsi macement kumahombekombe kumahombekombe kuti ive nechokwadi chekuti coil haizokuvadzwa nekushomeka kwemuchina.
Kuti tiite bvunzo, takamisa mapaipi emhangura mumapuranga maviri akatonhora ane akatonhora kupisa anotengesa. Induction Kutya inova nechokwadi chekudzokorora zvakakwana. Iko kune kuderedzwa kwakakosha munguva yekutenderera uye kuwedzera kwakanyanya kushanda sezvo ikozvino zvikamu zvakawanda zvinogona kutengeswa zvakafanana.
Categories Technologies Tags HF kutengesa PCB bhodhi, yakakwirira furu kutengesa PCB, induction soldering, induction soldering machine, induction kutengesa pcb, induction kutengesa PCB bhodhi, induction kutengesa PCB system, kutengesa PCB bhodhi, kutengesa PCB bhodhi maitiro Post navigation